Nkịta Ahụike | December 2021
Atiya: Nkịta Ahụike
Ọrịa mkpụrụ ndụ na nkịta
Akwụkwọ a bụ ihe mbụ nke mbọ m mere nke kpaliri site na nchọta na Scottish Terrier anyị dị ọnwa ise tara ahụhụ site na Type III von Willebrand’s Disease (vWD). Ọnụnọ nke ọrịa a gbasara ọbara ọgbụgba amabeghị anyị ruo mgbe ọ tara ahụhụ na-egbu ọbara ọgbụgba na-enweghị ihe kpatara ya. Ọgwụgwọ na-eso ... Gụkwuo
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na anụ ụlọ gị na - arịa gị
Mgbe ụfọdụ ihe dị mkpa karịa ụdị anụ ụlọ bụ njikwa nke ihe nrịanrịa anụ ụlọ dị nro. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọkachamara nwere ike inye aka.
Nnyocha na ọnya ọnya dysplasia (CHD) na-egosi na ọ bụ ọrịa gbagwojuru anya karịa ka e chere na mbụ. Onweghi azịza ma ọ bụ azịza dị mfe maka nsogbu a.
Ọrịa ụmụaka na-arịa
Na Jenụwarị nke 1990, enwetara m nwa nkịta m dị ọnwa iri abụọ na otu. Ọ bụ otu n'ime ụmụ nkịta atọ nọ na iri na otu iri na otu ịnwụ n'ihi Ọrịa ụmụaka. Themụ nkịta atọ niile nwere ọrịa ahụ pụtara na-eto eto ma na-eto eto ruo mgbe akara ngosi pụtara na ọnwa iri n'otu, na ọnwa iri abụọ ...
Ntuziaka kachasị mma maka ịgwọ Vaginitis na Nkịta
Vaginitis na nkịta chọrọ nlekọta pụrụ iche, anyị nwere ihe niile ịchọrọ, site na ndụmọdụ gaa na ọgwụgwọ ụlọ nke ga-eme ka nwa aji gị nọrọ na ezigbo ahụ ike.
Dọọ Ọrịa Borne na Nkịta
Babesiosis Gịnị Bụ: Babesiosis bụ ọrịa akwara hemoprotozoan (ọbara). The organism a na-akpọ Babesia, ọrịa a na-akpọ Babesiosis. Umu anumanu: Babesia canis, Babesia gibsoni Primary Vector: Brown Dog Akọrọ (ga-eri nri opekempe nke ụbọchị 2-3 iji kesaa) Vektọ ndị ọzọ: Akara Deer, mmịnye ọbara, agịga e metọrọ emetọ, na akụrụngwa, transplacental. Nchoputa: Enwere abuo ... Gụkwuo
Nsogbu Skin na Nkịta
Akpụkpọ anụ nkịta na-adabere na ntutu na mmanụ dị na ya iji debe ya n'ọnọdụ dị mma.
Tupu ị gụkwuo: Tupu ị zụọ azụ gị, biko kpọtụrụ onye na-agwọ ọrịa anụmanụ. Ozi a dị n’Ajụjụ a ekwesịghị ịkọwa n’ụzọ ọ bụla dị ka onye dochie anya nlekọta anụmanụ na ndụmọdụ. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịgbalị ịchọta onye dọkịta na-ahụ maka ụmụ anụmanụ nke maara nsogbu ịgba mgba nke canine. N'ihi na ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ ... G ...KWUO
German onye ọzụzụ atụrụ/ụlọ nyocha
nkịta ugwu bernese tozuru oke
black german onye ọzụzụ atụrụ gold retriever mix
ndimmadu ndụ nke imi uhie uhie
ụlọ nyocha German onye ọzụzụ atụrụ mix